Warka SAMSUNG: Daahfurka, Taleefoonada, Kiniiniyada iyo Waxbadan - Androidsis | Androidsis (Bogga 8)
Sawirro dhiirrigelin ah oo ku jira Galaxy Folder 2 ayaa soo baxaya
Galaxy Folder 2 waa taleefan flip oo la sii deyn doono Mareykanka iyo Shiinaha labadaba iyadoo la marayo FCC iyo TENAA.
New Samsung Galaxy Grand Prime ayaa ka muuqda GFXBench
GFXBench, waxaa soo muuqday Samsung Galaxy Grand Prime, oo cusbooneysiin doona taleefankan laga bilaabo labo sano ka hor. Qalab soo dhaweyntiisa lahaa.
Samsung waxay ku shaqeysaa nooc la cusbooneysiiyay oo ah Galaxy J7
Soo saaraha Kuuriya ayaa durbaba ka shaqeynaya cusbooneysiin loogu talagalay Galaxy J7 oo leh nooc kala duwan oo noqon doona casriga casriga ah ee aadka u xiisaha badan.
Samsung Galaxy C9 wuxuu lahaan lahaa shaashad 5,7-inji ah
Samsung waxay qarka u saaran tahay inay soo bandhigto terminalka saddexaad ee taxanaha C oo ay la socoto Galaxy C9. Qalab yeelan doona shaashad 5,7-inji ah.
Dhamaan macluumaadka ku saabsan Samsung Galaxy Note 7 cusub
Halkan waxaan kaaga tagaynaa qeexitaanada farsamo ee Samsung Galaxy Note 7 oo dhameystiran, terminal la socda warar badan.
[LIVE STREAM] Samsung Galaxy Note 7 Unpacked 2016 ayaa si toos ah uga socota meel kasta oo aad rabto
Maanta waxaan ku tusinaynaa dhammaan fursadaha aan haysanno si aan toos ugu aragno Samsung Galaxy Note 7 Unpacked 2016.
Faahfaahin dheeraad ah ee Samsung Galaxy Note 7 ayaa soo baxday
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa Samsung Galaxy Note 7 oo Samsung ah shan maalmood ka hor intaan si rasmi ah loo soo saarin oo la qorsheeyay Talaadada soo socota.
Iibinta Galaxy S7 ayaa cirka isku shareertay macaashka Samsung ee kii ugu weynaa muddo 2 sano ah
18% ka badan ayaa ah faa iidooyinka ay Samsung hesho rubuca labaad ee sanadkan iyada oo ay ugu wacan tahay iibinta Galaxy S7 iyo S7 edge.
Sawirro cusub oo saxaafadeed oo Samsung Galaxy Note 7 ah ayaa soo baxaya
Kuwani waa sawirrada saxaafadda ee Samsung Galaxy Note 7 oo midab dahabi ah leh ka dib markay ogaadeen inta ka hartay midabada mid kale oo daadanaya
Samsung Galaxy Note 7 wuxuu yeelan doonaa dekedda USB Type-C
Samsung Galaxy Note 7 ayaa ugu dambeyn yeelan doonta xiriir USB Type-C ah sida ka muuqata fiidiyowgan laga soo daayay Vietnam maanta.
Daadintan waxay xaqiijineysaa jiritaanka qalabka wax lagu baaro ee iris ee Galaxy Note 7
Galaxy Note 7 waxaa la soo bandhigi doonaa 2-da bisha Ogosto waxaana xogtan cusub ee la daadiyey la dhihi karaa in qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'iris scanner' uu ka dhex muuqan doono casriga.
Samsung ayaa xaqiijisay, Ogosto 2 waa soo bandhigida Samsung Galaxy Note 7
Ugu dambeyntiina waxaan horeyba u haysannaa xaqiijinta Samsung si loo soo bandhigo rasmiga ah ee Samsung Galaxy Note 7 2 Ogosto.
Samsung waxay soo saartay Galaxy On5 Pro iyo Galaxy On7 Pro
Samsung waxay soo bandhigaysaa cusbooneysiinta qalabka ee On5 iyo On7 oo leh Galaxy On5 Pro iyo On7 Pro gudaha Hindiya. Laba terminaal-dhamaadka aad u xiiso badan.
Geekbench wuxuu xaqiijinayaa in Samsung Galaxy Note 7 uu xambaari doono Snapdragon 820 chip
Samsung Galaxy Note 7 ayaa yeelan doonta nooc la mid ah Qualcomm's Snapdragon 820 chip oo loogu talagalay Maraykanka iyo Shiinaha, halka inta soo hadhayna mid kale yeelan doonaan.
Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy J Max iyo Galxy J2 (2016)
Toddobaadkii la soo dhaafay, mahadsanid daadintii Galaxy J2 (2016), waxaan awoodnay inaan aragno giraantii ogeysiiska LED-ka oo ...
26 milyan oo Galaxy S7 ah ayaa iibin lahaa Samsung
Samsung waxay marba marka ka dambeysa ka sii socotaa xoog ilaa xoog iyo shiraac buuxa sanadkan si ay u ogaato hadda inay iibin lahayd 27 milyan oo unug oo ah Galaxy S7
Samsung Galaxy Note7 waxay ka soo muuqataa AnTuTu
AnTuTu waxaan ka heli karnaa Samsung Galaxy Note 7 cusub iyo qalabka ay heysato oo la filayo sida ku cad xogaha kala duwan ee soo muuqday
Smart Glow, nooca cusub ee Samsung ee ogeysiisyada LED-ka, ayaa ku daatay Galaxy J2 (2016)
Samsung waxay abuurtay nidaam ogeysiis LED-giraan qaabeeya oo cusub oo aan horeyba ugu arki karno sawirka ugu horreeya ee Galaxy J2 (2016)
Kuwani waa daabacaadda saxaafadda ee Galaxy Note7
Evan Blass ayaa bartiisa Twitter-ka la wadaagay sawirada ay ka bixinayaan Samsung Galaxy Note7 oo la soo bandhigi doono 2-da Ogosto.
Wejiga hore ee Samsung Galaxy Note 7 ayaa daadanaya
Waxaan horey u haysannay hore Samsung Galaxy Note 7 halkaas oo aad ka ogaan karto qalabka iris-ka iyo godad taxane ah oo ku habboon farsamooyinka.
ZTE nubia Z11 ayaa lagu shaaciyey shaashadda 5,5 ″ 1080p, Snapdragon 820 chip iyo 6GB oo RAM ah
ZTE nubia Z11 wuxuu la yimaadaa dhammaan ujeeddooyinka ah inuu noqdo taleefan casri ah oo weyn oo ay ku jirto Snapdragon 820 chip iyo 6GB RAM
Abuureyaasha Samsung waxay raadinayaan filim sameeyayaal iyo hal abuureyaal si ay u soo saaraan waxyaabaha ku saabsan VR
Abuureyaasha Samsung waa hindise doonaya inuu ku dhiirrigeliyo filim sameeyayaasha iyo abuurayaal tayo sare leh inay ku soo bandhigaan VR ama xaqiiqda dhabta ah
Samsung Galaxy Note 7 ayaa la imaan doonta hal nuqul oo leh shaashad qalooca
Nooca geesku wuxuu umuuqdaa inuu ku socdo wadada si uu u noqdo daabacaada kaliya ee la iibin doono marka la helo Galaxy Note 7.
Samsung Galaxy S8 wuxuu lahaan karaa shaashadda shaashadda UHD iyo qaabeynta laba kamaradood
Xanta ku saabsan wanaagga Samsung Galaxy S8 ee soo socota ayaa durbaba bilaabatay. Midkan waxay ka hadlayaan qaabeynta kamarad laba-gees ah iyo xallinta 4K.
Samsung 'Smart Glow' ayaa timid inay dib u cusbooneysiiso ogeysiisyada LED-ka
Galaxy J2 waxaan ka heli doonnaa markii ugu horeysay muuqaalkan loo yaqaan "Smart Glow" waxaana loogu talagalay in lagu beddelo ogeysiisyada LED-ka.
Samsung Galaxy S7 ayaa gaari doonta 25 milyan oo unug oo la iibiyay dhamaadka bisha
Laba ilo Kuuriya ayaa sheeganaya in dhamaadka bisha Juun, Samsung ay iibin doonto in ka badan 25 milyan oo unug oo ah Galaxy S7.
Waxaa u dusay muuqaal dhacdo 2-dii Ogosto loogu talagalay Samsung Galaxy-ka soo socda
Casuumaadda loo maleynayo Galaxy Note 7 oo aad ku arki karto khadadka naqshadeynta iyo ballanta Ogosto 2 ee soo bandhigideeda ayaa la dusiyay.
Bilowgii sanadka 2017 waxaan arki karnaa aaladdii ugu horeysay ee Samsung oo leh shaashad jilicsan, oo awood u leh inay ka baxdo 5 ilaa 8 inji.
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa J3 Pro shaashadda 5 ', Snapdragon 410 iyo 2 GB oo RAM ah
Samsung Galaxy J3 Pro waa terminal-ka cusub ee hagaajinaya qeexitaanka wixii ka horreeyay ee Galaxy J3 sida in 2GB RAM iyo xusuusta gudaha.
Samsung Pay waxaa hadda laga heli karaa Spain
Laga bilaabo maanta, Samsung Pay ayaa horeyba looga heli jiray Isbaanish si lacag looga bixiyo moobilka meherado ganacsi oo kala duwan oo wanaagsan.
Samsung Galaxy J3 Pro wuxuu u muuqdaa shaashad 5-inji ah oo 1080p ah iyo 2 GB oo RAM ah
Samsung Galaxy J3 Pro ayaa ku sii jeeda suuqa Shiinaha bishan. Suuq Shiineys ah oo markale ay xukumaan Xiaomi.
Samsung Pay wuxuu imaan doonaa Spain bisha June 2
Sugitaan dheer kadib, Samsung Pay ugu dambeynti wuxuu yimid Spain: Juun 2, nidaamka Samsung Pay wuxuu gaari doonaa tiro badan oo xarumo ah.
Samsung Galaxy S7 Edge Caddaalad Darrada Edition garaacaysa suuqa ee June
Samsung ayaa xaqiijisay in Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition uu suuqa soo gali doono bisha Juun ee soo socota, iyadoo Batman uu yahay halyeeyga
Samsung waxay si toos ah u soo bandhigi kartaa Samsung Galaxy Note 7
Samsung waxay sii hormarineysaa nambarkeeda xiga si ay si toos ah ugu soo bandhigto Samsung Galaxy Note 7 halkii ay kaheli lahayd Note 6
Samsung Galaxy S8 wuxuu lahaan karaa shaashad 4K AMOLED iyo tiknoolajiyad kamarad fiican
Iyadoo Samsung Galaxy S7 cajiib ah, warar xan ah ayaa durbaba bilaabay inay ka dhawaajiyaan Galaxy S8 cusub oo lagu xamanayo inuu la yimaado shaashadda 4K Super AMOLED
Tijaabadan iska caabinta ah ee udhaxeysa Galaxy S7 iyo iPhone 6s kama tagayo Samsung meel aad u wanaagsan
Tijaabadan fiidiyowga iska caabinta ah ee u dhexeeya Samsung Galaxy S7 iyo iPhone 6s, waxaad ku arki doontaa labada taleefan kee u adkaysi badan. Ayaa guuleysan doona?
Sawirada cusub ee Samsung Galaxy X waxay muujinayaan shaashadiisa jilicsan
Samsung waxay soo bandhigtay nooc cusub oo shaashad jilicsan oo laysku shaandheyn karo laguna dhejin karo Samsung Galaxy X
Samsung Galaxy Note Edge waxaa loo cusbooneysiiyay Android 6.0.1 Marshmallow
Samsung Galaxy Note Edge ee bilaashka ah ee nuqulkeeda Yurub wuxuu heli doonaa Android 6.0.1 Marshmallow muddo qiyaas ah oo ah toddobaadyo 3
3 sababood oo aan ugu jeclahay Samsung Galaxy S7 gees
Samsung Galaxy S7 geesku waa taleefan maalmo gudahood lagu soo jiidan karo astaamahiisa gaarka ah oo aan ku muujiyo seddex.
Raadinta ugu weyn ee Samsung Galaxy S7 ayaa ka muuqata Ruushka
Samsung ayaa dhigtay boodh aad u weyn oo loogu talagalay Samsung Galaxy S7 geeska oo cabirkiisu yahay 80 mitir iyo balac dhan 40 mitir waddo ku taal Moscow.
Samsung waxay diyaarineysaa Galaxy X sanadka 2017
Samsung Galaxy X wuxuu noqon doonaa ku darista cusub ee soo saaraha Kuuriya si uu ula wareego boqortooyada dhamaadka-sare leh teknoolojiyad gaar ah oo gaar ah.
Samsung Galaxy Note 6 ayaa la sii deyn doonaa bartamaha bisha Ogosto
Samsung Galaxy Note 6 waxaa la soo bandhigi doonaa bartamaha bisha Ogosto, gaar ahaan 15-ka sida loo yaqaan isha @evleaks.
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016 hadda waa rasmi
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa kiniinkeeda cusub ee Galaxy Tab 10.1 (2016) kaas oo curyaan yar ku leh xusuusta gudaha oo aan ka badneyn 16GB.
Jaan-goynta ayaa muujineysa qeexitaannada Samsung Galaxy S7 Active
GFXBench wuxuu wadaagaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qeexitaanada cusub ee Samsung Galaxy S7 Active, taleefan u leh deegaan kasta
Samsung's Galaxy C5 ayaa mar kale ku daatay dhowr sawir
Waxaan si fiican u qaabeyneynaa sawirka taleefankan cusub ee Samsung oo la yimid biro jir ah iyo isku ekaansho qaabeynta shirkadda HTC.
Samsung waxay isu soo bandhigaysaa Galaxy C5 oo qaadanaysa qaar ka mid ah naqshadda HTC
Samsung Galaxy C5 ayaa ah kii ugu horeeyey ee khadadka taleefoonada cusub ee shirkada soo saarta Kuuriya soo gaadho Shiinaha lamana oga inay ku degi doonaan qaybahan.
Samsung ayaa mar kale Apple ku garaacday suuqa casriga ee Mareykanka
Samsung ayaa Apple u dhaaftay tan iibisa taleefannada ugu badan Mareykanka. Waxay ahayd kow iyo toban bilood ka hor markii u dambaysay ee ay suuqan hoggaamiso.
Samsung Galaxy Tab S3 8.0 Qeexitaannada Sirta ah ayaa xaday
Markaan sii dhex marno TENAA, waxaan horeyba u ogaan karnaa qeexitaanka Samsung Galaxy Tab S3 8.0 oo aad ugu eg tabtii hore ee S2.
Samsung Galaxy Note 6 wuxuu yeelan karaa USB Type-C
Galaxy Note 6 ayaa la filayaa bisha Ogosto in ay ku dhawaaqdo Samsung. Terminal cusub oo la imaan doona taageerada USB Type-C.
Faahfaahinta Galaxy Note 6 oo leh Snapdragon 823 chip iyo 6GB RAM ayaa mar kale soo baxaya
Sida ku cad xog cusub oo ka soo baxday Galaxy Note 6, waxay lahaan laheyd 6GB RAM iyo xasuusta gudaha ah 256 GB iyada oo aan la ogeyn hadii ay yeelanayso microSD.
Samsung waxay daabacdaa natiijooyin maaliyadeed oo aad u wanaagsan Q1 iyada oo ay ugu wacan tahay guusha S7
Thanks to Galaxy S7 iyo S7 edge, Samsung waxay awood u yeelatay inay ku dhawaaqdo natiijooyin maaliyadeed wanaagsan Q1. Sannad noqon doona mid aad u xiiso badan.
Galaxy S7 iyo S7 geesku waxay horeyba u lahaayeen noocooda dahabka ah ee kore ee Kuuriya
Samsung ayaa ku dhawaaqday helitaanka Galaxy S7 iyo S7 Edge noodhadhkoodii dahabka ahaa ee hore loo sii daayay ee Kuuriyada Koonfureed.
Caddaymaha Galaxy C7 ayaa xaday
Galaxy C7 waa mid ka mid ah terminaallada ay Samsung ku rajo weyn tahay inay kula dagaallanto kuwa soo saarayaasha Shiinaha labadii sano ee la soo dhaafay.
Sidee loo cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy S6 Edge Plus si rasmi ah Android 6.0.1 gacanta iyo adigoon waayin damaanad
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo isticmaalo Odin si loogu cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S6 Edge Plus oo loo adeegsado rasmiga ah Android 6.0.1 gacanta oo aan lumin dammaanadda.
Sida loo soo dejisto firmware rasmi ah ee ugu dambeeyay Samsung terminals. Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo la cusbooneysiiyay 2016.
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo soo dejisto rasmiga rasmiga ah ee Samsung dhammaan noocyada taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada waddammada kala duwan ee saldhigoodu yahay Kuuriya.
Madaxa ilaa madaxa: Huawei P9 vs Samsung Galaxy S7
Huawei wuxuu bilaabay shirkadiisa Huawei P9, waxaan hordhignay Galaxy S7 si loo cabiro qeexida iyo awooda
Samsung waxay qaybisaa 9,5 milyan oo Galaxy S7 ah rubuca koowaad ee sanadka
Samsung waxay dib u soo celisay kaarka micro SD-ka iyo iska caabbinta biyaha ee Galaxy S7 iyo Galaxy S7 gees si ay u muujiso inay doonayso inay sanad weyn ku hesho iibka.
Samsung waxay ku shaqeyn kartaa laba nooc oo cusub oo Galaxy S7 ah oo ay la socdaan processor-yada Helio X20 iyo Helio X25
Qaar ka mid ah jaangooyooyin xaday ayaa muujinaya Samsung Galaxy S7 oo yeelan doonta laba nooc: mid leh processor MediaTek Helio X20 iyo mid kale oo leh Helio X25.
LG G5 wuxuu ku garaacaa Samsung Galaxy S7 dhowr tilmaam
Samsung Galaxy S7 waxaa garaacday LG G5 heerar kala duwan oo ay ka mid yihiin AnTuTu iyo Geekbench 3.
Samsung ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday Galaxy J7 iyo Galaxy J5
Samsung waxay leedahay laba taleefan cusub oo leh Galaxy J5 (2015) iyo Galaxy J7 (2016) kuwaas oo ku daraya dhamaadka sare ee loo soo bandhigay Galaxy S7 iyo S7 edge.
Samsung Galaxy Note 6 ayaa la bilaabi karaa bisha Luulyo iyada oo loo adeegsanayo Android N
Samsung waxay iska dhigi kartaa booska koowaad haddii ay awood u yeelan lahayd inay soo saarto Galaxy Note 6 oo leh Android N bartamaha bisha Luulyo.
Galaxy S7 edge waa taleefanka ugu fiican ee leh kamaradda ugu fiican suuqa sida ku cad bogga DxOMark, khabiir ku ah sameynta tijaabooyinka farsamada
Samsung Galaxy S7 Mini dhab ayey noqon kartaa
Samsung waxay ka fekeraysaa inay soo saarto nooc Samsung Galaxy S7 Mini ah si ay ula tartanto iPhone-ka cusub, ee xanta iPhone SE.
Qiimaha soo saarista Samsung Galaxy S7 waa $ 255
Laga soo bilaabo shirkadda IHS, burburka Samsung Galaxy S7 ayaa la sameeyay iyo qiimaha mid kasta oo ka mid ah qaybaha ka kooban illaa 255 doolar
Raadi kala duwanaanta sawirrada ay qaadeen labada moodel kamarad ee Galaxy S7 edge
Ugu dambeyntiina, waxaan haynaa isbarbardhigga sawirrada laga qaaday Galaxy S7 gees leh Sony IMX270 iyo Samsung ISOCELL sensor.
Run ahaantii Exquisite horay-u-amarro noocyada casriga ah ee Galaxy S7 iyo S7 gees ee dahab iyo platinum
Run ahaantii Exquisite ayaa horay u dalbatay daabacadaha gaarka ah iyo kuwa casriga ah ee Galaxy S7 iyo S7 Edge ee dahabka iyo platina
Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge waxay ku sii nagaanayaan nooca 2.0 ee Qualcomm's Quickcharge
Lacagta degdegga ah ee Qualcomm ayaa lagu dhimayaa Galaxy S7 iyo S7 gees ilaa nooca 2.0, halka LG G5 uu leeyahay nooca 3.0 ee Quickcharge
Samsung Galaxy A9 Pro ayaa ka muuqda AnTuTu oo leh 4GB RAM
Qalabka jaangoynta AnTuTu wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan Samsung Galaxy A9 Pro, nooc ka mid ah A9 oo leh astaamo ka wanaagsan
Saddex fiidiyow oo cusub ayaa muujinaya astaamaha ugu cad cad ee Samsung Galaxy S7 iyo Galaxy S7 gees
Samsung ayaa soo saartay seddex fiidiyow oo cusub oo ay ku muujineyso astaamaha ugu fiican ee Galaxy S7 iyo Galaxy S7 gees
Qufulka shabakadda ee Samsung Galaxy S7 iyo Galaxy S7 Edge
Xannibaadda shabakaddu waxay ku soo noqotay Samsung Galaxy S7 iyo Galaxy S7 Edge oo aan ka iibsanno ama ka iibsanno hawlwadeennada taleefanka gacanta.
Waxaan waji galnay Samsung Galaxy S6 fool ka fool Galaxy S7 si aan u ogaano faahfaahinta laba terminaal fiican
Galaxy S7 ayaa hadda la soo bandhigay laakiin waxay hore u leedahay mid ka mid ah cinwaannada ugu kala duwan; in shaashadda ugu fiican la helo.
Samsung Galaxy S7 iyo Galaxy S7 gees waxay isticmaalaan Sony kaamirada kamaradaha IMX260
Maanta waxaan ognahay in Galaxy S7 iyo S7 Edge ay leeyihiin isla Sony IMX260 lens lens oo lagu arkay S6 hore.
Waxaan horey u haysannay qiimaha Samsung Galaxy S7, oo horeyba loo heli jiray kahor iibka
Laga soo bilaabo bogga rasmiga ah waxaad ka heli kartaa horay u sii qabsashada Samsung Galaxy S7 iyo Galaxy S7 Edge
Ololaha xayeysiinta ee layaabka leh ee Samsung Galaxy S7 waxaa ka mid ah… olol rinjiyeynta taleefanka ah!
Samsung ayaa daabacday feker xiiso leh oo Samsung Galaxy S7 ah taas oo muujineysa ololka sida muuqaalka filimka.
Fiidiyow xaday oo Samsung Galaxy S7 ah ayaa muujinaya caabbinta biyaha iyo amarka wireless-ka
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee Samsung Galaxy S7 waa iska caabbinta biyaha iyo boodhka leh shahaadada IP68.
Samsung Galaxy S7 Edge Batman v Superman Edition? Maxaa diidaya!
Samsung waxay diyaarin laheyd Samsung Galaxy S7 Edge Batman v Superman, oo u istaagi laheyd isdhexgalka shakhsi ahaaneed
Dhowr maalmood ka dib soo bandhigideeda, waxaan haynaa laba sawir oo dhab ah oo dhab ah oo Samsung Galaxy S7 gees ah halkaasoo dhawaaqiisa qalooca ee gaarka ah lagu xaqiijiyay
Waxyaabaha cusubi waxay xaqiijinayaan naqshadda Samsung Galaxy S7 Edge
Sawirro cusub ayaa muujinaya qaabeynta Samsung Galaxy S7 Edge, taleefanka xiga ee la soo bandhigi doono 21-ka Febraayo
Astaamaha farsamo ee Samsung Galaxy Note 6 waa la sifeeyey
Iyada oo loo marayo shabakadda bulshada ee Weibo, astaamaha farsamo ee suurtagalka ah ee Samsung Galaxy Note 6, xubinta ku xigta ee u dhererka Note-ka, ayaa la dusiyay.
Qiimaha Samsung Galaxy S7 iyo Galaxy S7 Edge waa la sifeeyey
Qiimaha Samsung Galaxy S7 Edge iyo Samsung Galaxy S7 ayaa la dusiyay, taas oo ilaalin doonta qiimo aad ugu eg tii kuwii iyaga ka horreeyay.
Guusha 'Galaxy Edge' iyo ka ganacsiga aan ahayn 'Note 5' ee Yurub waxay soo jeedinayaan in dhammaadka xadka uu aad u dhow yahay
Tartankan cusub wuxuu muujinayaa naqshaddii ugu dambeysay ee Samsung Galaxy S7 Edge, calanka soo socda ee soo saaraha Samsung
Sawir cusub ayaa la helay oo muujinaya in kaameradda Samsung Galaxy S7 ay dhab ahaan khafiifin doonto
Koox macaamiisha ah ayaa go'aansaday inay Samsung ka dacweeyaan ku guuldareysiga inay cusbooneysiiyaan boosteejooyinkooda noocyada ugu dambeeyay ee Android.
Samsung Galaxy S7 accessories liistada liistada
Website-ka Jarmalka waxaad ka heli kartaa liiska qalabka Samsung Galaxy S7 qoyska uu ku yaal kiiska batteriga
Dhamaan waraaqaha sawirada ee Samsung Galaxy S7 hadda waa la heli karaa. Wadar ahaan 13 si aad shakhsi uguhesho taleefankaaga
Muxuu ahaa Galaxy S illaa maxay tahay Galaxy S6
Galaxy S6 wuxuu ahaa taleefanka casriga ah ee isbadalka Samsung, sida S kii ugu horeeyay uu ahaa tillaabadii ugu horreysay ee taleefanno tayo sare leh
Sawirkii ugu horreeyay ee dhabta ah ee Samsung Galaxy S7 waa la sifeeyey
Sawirkii ugu horreeyay ee dhabta ah ee Samsung Galaxy S7 ayaa laga helay sirta isticmaalaha Facebook
Shaqaalahaaga ugufiican: Samsung Galaxy Note 4
Waad ku mahadsantahay shaashadeeda weyn, S Pen stylus iyo qaababka sida qaabka gaarka ah, Snap Note, ... Samsung Galaxy Note 4 ayaa ugu fiican in lala shaqeeyo.
Samsung Gear S2, falanqeyn: Samsung waxay ku garaacday calaamadda smartwatch-keeda cusub
Waxaan fulineynaa falanqeyn dhameystiran oo ku saabsan Samsung Gear S2, smartwatch-ka ugu horreeya oo leh wareeg wareeg ah iyo wareegga wareegga ee Samsung oo u taagan isticmaalka Tizen
Hawlaha qaarkood ee yeelan doona dhinacyada Samsung Galaxy S7 Edge waa la sifeeyaa
Qaar ka mid ah shaqooyinka ay dhinacyada Samsung Galaxy S7 Edge ku biirin doonaan ayaa la dusiyay
Tirooyinka iibka casriga ee Samsung ayaa sii dhacaya
Samsung waxay lumineysaa uumiga waxayna tirooyinkii ugu dambeeyay ee la bixiyay ay u noqotay marmarsiinyo in tartanka lagu eedeeyo
Boodhadh lagu soo bandhigayo Galaxy S7 ayaa la sifeeyey oo xaqiijinaya qaar ka mid ah astaamaheeda farsamo
Boodhadh lagu soo bandhigayo Galaxy S7 ayaa la daadiyay isagoo xaqiijinaya astaamaha farsamo ee calanka Samsung ee soo socda
Samsung ayaa bilaabi doonta barnaamij kiro ah oo ay had iyo jeer ku haysato Galaxy ugu dambeeyay
Markii Galaxy S7 la shaaciyo, wax walba ayaa laga ogaan doonaa barnaamijkan cusub ee kuu oggolaanaya inaad yeelato Galaxy S cusub sanad walba oo bil kasta laga qaado
Shaqaale Samsung ayaa siideeya macluumaad kusaabsan Galaxy S7 iyo Galaxy S7 gees
Samsung Galaxy S7 waa taleefan cusub oo aan arki doonno 21-ka Febraayo oo aan maanta ka heli karno waxyaabaha cusub
Samsung Pay ayaa ugu dambeyn timid Spain
Sugitaan dheer ka dib ku dhowaad afar bilood, Samsung Pay ugu dambeyntii wuxuu yimid Spain isagoo ka yimid La Caixa waxaana loo isticmaali karaa CaixaBank iyo ImaginBank
AnTuTu wuxuu muujinayaa astaamaha farsamo ee Samsung Galaxy S7, nooca Exynos, wuxuuna balan qaadayaa jaangooyooyin cusub dhowaan
Iyada oo loo marayo astaanta Weibo ee AnTuTu, astaamaha farsamo ee nooca Samsung Galaxy S7 Exynos ayaa la soo daadiyey
Astaamaha suurtagalka ah ee Samsung Galaxy J7 waa la sifeeyey
Dhamaan halbeegyada Samsung Galaxy J7 (2016) waa la sifeeyey, taas oo labanlaabeysa xusuusteeda RAM, una boodaysa qaybta dhexe ee qaybta sare.
Samsung Galaxy J5 (2016) tilmaamaha ayaa muuqda
Jaangooyooyinkii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy J5 (2016) ayaa la soo daadiyay, oo muujinaya dhammaan astaamaha farsamo ee taleefanka cusub ee Samsung.
Samsung waxay hagaajineysaa farsamada Galaxy Note 5 S Pen ee dib u eegista cusub
Ugu dambeyntii Samsung waxay soo saartay dib u eegis ku saabsan Note 5 halkaasoo habka loo yaqaan 'Pen Pen' lagu saxo si dhibaatooyinka la siiyay aysan mar kale u soo noqon.
Qaar ka mid ah sawirrada aaladda jimicsiga jirka ee cusub ee Samsung ayaa xaday
Qaar ka mid ah sawirrada 'SM-R150' waa la sii daayay, waa qalab cusub oo jimicsi jireed Samsung ah oo leh qaab isboorti oo qurux badan.
Samsung Galaxy A5 (2016), kani waa taleefoonka dhex dhexaadka ah ee cusub ee dhammeystiran shirkadda Samsung
Samsung Galaxy A5 (2016) mar hore ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay, nooca cusub ee barta dhexe ee bartamaha fog leh ee qiimaha sare leh
Galaxy S7, S7 Edge iyo S7 Edge + waa la soo bandhigi karaa isla waqtigaas
The terminals cusub star ee soo saaraha Kuuriya Samsung, Galaxy S7, Galaxy s7 Edge iyo Galaxy S7 Edge +, ayaa la soo bandhigi karaa isku mar.
Samsung ayaa si aamusnaan leh u daahfureysa Galaxy J1 oo leh shaashad 4,5-inch ah $ 135
Markii ay noqdeen laba xayawaan oo bunni ah wax ka yar $ 100, sida Redmi 3 iyo Lemon 3, Samsung waxay ku dhawaaqday Galaxy J1
Soosaarayaasha cusub ee Galaxy S7 ee raaca khadadka naqshada ee Xusuusin 5 waa la sifeeyaa
Waxaa jira durba xog yar oo aan awoodnay inaan isha ku hayno toddobaadyadii la soo dhaafay si aan u baranno Galaxy S7 oo dhow
Sawirradii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy J1 waa la sifeeyey
Sawiradii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Samsung Galaxy J1 ayaa la helay. Evan Blass ayaa mas'uul ka ahaa shaandhaynta turjumaadahan muujinaya qaabkiisa.
Faahfaahinta Galaxy S7 waxay ka muuqataa AnTuTu
Waxaan horeyba u xaqiijin karnaa qeexitaanada Samsung ee Galaxy S7 adoo miiraya shaashadan tallaabada terminalka ee AnTuTu
Sawir xagga hore ee Samsung Galaxy S7 ah oo 5,7 aks daadanaya
Shirka 'World World Congress' afarta nooc ee Galaxy S7 ayaa ku kulmi doona, kuwaas oo maanta aan hayno macluumaad cusub oo la xiriira 5,7 "
Samsung waxay shatiyadeysay aalad qalaad oo leh shaashad qalooca
Samsung waxay samaysatay nooc cusub oo u muuqda qaabkiisa trapezoidal iyo naqshadeynta qalooca. Telefoon qalooca oo cusub oo Samsung ah?
Halbeeg cusub oo loo yaqaan 'Samsung Galaxy S7' ayaa jabiya dhammaan diiwaanada
Jaangooyooyin cusub ayaa la daadiyay oo muujinaya awoodda cajiibka ah ee Samsung Galaxy s7 oo leh processor Exynos 8890, jabinaya dhammaan diiwaanada.
Galaxy Active Neo, dhamaadka-hoose sidoo kale waa iska caabin
Terminal-yada ugu adkaysi badan waxay ku jiraan safaf dhaadheer, illaa iyo hadda iyo taasi waa, soo saaraha Samsung wuxuu soo bandhigay Galaxy-Active Neo-dhamaadka-hooseeya.